News - Ihe omuma ohuru ohuru- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Anyị na-agbanye ụdị ngwaahịa abụọ ọ bụla - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module.
Buildinglọ ọ bụla na-akọ akụkọ, ya mere n'ime ya. Mpempe akwụkwọ ọkụ ọkụ dị mfe iji wuo nke ọkụ ọkụ sitere na HYM Lighting nwere ike inyere gị aka ịkpụzi akụkọ ahụ. Dị modular ahụ na-ejide n'aka na ọ dabara n'ime ime ọ bụla, nnukwu ma ọ bụ obere, dị obi ume ma ọ bụ dị oke ọnụ. Nwee ihu ọma ya, kwa ụbọchị, kwa afọ. Ọ bụrụ n’ikpebie igbanwe ime ime gị, ị nwere ike ịgbanwe ya ngwa ngwa ọkụ na animation na ya.
Ogwe ndị na-agbanwe agbanwe na-enyere gị aka ịmepụta ihe owuwu siri ike n'akụkụ abụọ:
Mee eserese ka ị dịrị ndụ ma ọ bụ tinye mgbagharị na ikuku pụrụ iche na mgbidi na uko ụlọ
Ọ dị mfe ịgbanwe mbipụta ma ọ bụ ọdịnaya LED. Mee ka mpịakọta igwe gị dị n'elu ụlọ dịka oge si dị, dịka ọmụmaatụ: igwe ojii na mmiri, anwụ na-acha n'oge ọkọchị, udu mmiri na ọdịda na udu mmiri n'oge oyi.
Dynamic RGB Curtain ikanam warara nke uru dị mfe iji wụnye, anyị na-anabata K-8000C akara kaadị na mmemme nke ikanam.
The Dynamic RGB LED Panel nakweere K-8000C nke njikwa njikwa iji mepụta LED ahụ na protocol DMX512.
Site taa gaa n'ihu, akwa na ikanam ya ịsụ asụsụ ọhụrụ bụ mgbanwe dị egwu na ya, na-agbasa usoro ahụ na nguzobe nke akụkọ n'ihi Ikanam ahụ abụghịzị ọfụma mana enwere ike ịkwaga ya.
Ya mere, ọ nwere ike ịkọwa mbipụta na onyonyo ahụ ma nyekwa ìhè ziri ezi na nke a bụ mpaghara ọhụrụ maka ọkụ azụ, nke a bụ ịtọlite ​​ụlọ ahịa, ịzụ ahịa Windows, ụlọ ngosi ihe ngosi, mmemme, ngosipụta nke ọhụụ ọhụụ: igbe ọkụ dị ike, dịka igbe ọkụ ọdịnala , nke mejupụtara ngwongwo aluminom na mkpuchi akwa omenala, ma mebie ụkpụrụ na azụ nke modulu LED, nwere ike dịka ịchọrọ ị nweta mmetụta anya nke mmemme na ya.
Nsonaazụ bụ ihe onyonyo dị iche iche site na mmegharị nke ìhè wee bụrụ ịrị elu doro anya na-elekwasị anya na usoro ọhụụ na teknụzụ ọhụrụ, iji mee ka ha baa ọgaranya, na-eme ka ha maa mma ma dị mma. Jiri software-K-8000C na mmemme nke ikanam, mmemme nke ikanam ga-agbanwe dịka onyonyo mbipụta site n'oge ruo n'oge. Ya mere, usoro dị mfe: usoro ihe eji arụ ọrụ aluminom na sistemụ ọkụ na-adị otu, mana iji nweta ngwaahịa ọhụrụ, naanị mkpa ịgbanwe ụzọ ihe oriọna na ekwentị nwere ike ịdị ka mgbanwe siri ike ma dị mfe bụ ntọala nke ọdịnihu akụrụngwa.
Post oge: Feb-16-2020